I-Whitsitt Family Lodge. (umbindi weFulton County) - I-Airbnb
I-Whitsitt Family Lodge. (umbindi weFulton County)
Bernadotte Township, Illinois, United States
Indlwana yethu yayikwilali encinci ngakuMlambo iSpoon. Simi kwisiqingatha sendlela phakathi kweChicago kunye neSt. Sikwayimizuzu engama-30 kuphela ukusuka eMacomb, Il (iYunivesithi yaseWestern Illinois). Indawo ibonelela ngezinto ezininzi ezizodwa. Front Porch Soap snd Gift Co., Indian Trails Winery, Big Horse Winery, Dickson Mound Museum, The Apple Place Orchard, and Emaquon.
Indawo yokutyela: Bernedott Cafe, Roadhouse ipava , Il. Isicelo seentsuku ezi-2 siyafumaneka. Izinga lobusuku obubini liya kuba yi-$ 115 ngobusuku.
Yindlu ka-1950 yasemva kwexesha ehlaziyiweyo. Yindawo eyirustic phambi kwamanzi eSpoon River. Ndiyichaza njengendawo yokuphumla yendalo enoxolo, kunye nobunewunewu bezinto zangoku.
Sinendawo yokuba isibini, usapho okanye abahlobo bahambe. Siyakonwabela ukusingatha, kuyanika umdla ukubona ukuba basuka phi abantu, kunye nendlela abalifumana ngayo icwecwe lethu lehlabathi.
Indawo ye-pavillion ibe yeyona ndawo uyithandayo yokuxhoma, ukusela ikofu kusasa, kwaye upheke isidlo sangokuhlwa ukuba ufuna ukoyila. Sinesangqa esikhulu somlilo esihlala kufuphi nonxweme lomlambo, ngoko ke musa ukulibala iimarshmallows. Kukho umthunzi omninzi kwezo ntsuku zishushu zasehlotyeni. Ungonwabela i-kayaking, ukukhwela iphenyane okanye ukuhlala nje ngasemva ukonwabela umbono. Sijonge phambili ukuhlala kwakho. Igumbi lokulala elikhulu libucala, ngelixa amanye amagumbi amabini avulekileyo kwelinye. Indawo yendlu yangaphakathi imalunga ne-1000 sq ft. Kukho indawo eninzi ngaphakathi nangaphandle yomntu wonke.
Cwaka. Le yilali encinci emlanjeni. Abantu bahlanganisana epakini ekufutshane ukuze babukele amanzi egxalathelana phezu kwedama okanye amadoda afole edameni eloba emanzini. Le ayiyomntu oqalayo. Kukho ikhefi encinci enkulu epakini. Icafe ikumgama nje omfutshane ukusuka kwindlwana (mhlawumbi imizuzu esi-7).
Siza kuqala ngokuthumela imiyalezo. Siza kukwenza umnxeba omnye kuwe ngosuku olungaphambi kokufika kwakho. Sivuleleke kwiifowuni ezivela kwiindwendwe zethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bernadotte Township